iZotope က RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်မှု - စာနယ်ဇင်းနှင့်အသံလွှင့်ပညာရှင်များအတွက် Loudness Correction Plug-in အသစ် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » iZotope ကြေညာချက်များ RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေး: နယူးအသံကျယ်ပြင်ဆင်ခြင်း Plug-in ကိုစာတိုက်နှင့်အသံလွှင့်ပညာရှင်များများအတွက်
iZotope ကြေညာချက်များ RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေး: နယူးအသံကျယ်ပြင်ဆင်ခြင်း Plug-in ကိုစာတိုက်နှင့်အသံလွှင့်ပညာရှင်များများအတွက်
iZotope, Incတစ်ဦးဦးဆောင်အသံနည်းပညာကုမ္ပဏီ, ယနေ့က၎င်း၏အသစ်က RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေး plug-in ကိုကြေညာခဲ့သည်။ RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေးအလိုအလျှောက်အသံ post ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုကူညီခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးမြင့်, စက်မှုလုပ်ငန်း-compliant ရောသမမွှေများဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေးတဲ SL2015 အတွက် NAB 4330 မှာထုတ်ဖော်ပြသခြင်းနှင့်ကြိုတင်မှာယူရရှိနိုင်ပါသည်လိမ့်မည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသံကျယ်စံချိန်စံညွှန်းများကျယ်ပြန့်ကလေးမွေးစားခြင်းနှင့်အတူတာဝန်မကြာခဏအစီအစဉ်များလိုအပ်သောအသံကျယ်စံ၏သင့်လျော်သောသည်းခံစိတ်အတွင်းကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန် content ကိုဖန်တီးသူတွေနဲ့နေဆဲဖြစ်သည်။ RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ, ဗွီဒီယိုနဲ့အသံအယ်ဒီတာများကိုအလွယ်တကူသူတို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတင်းပလိတ်များအစုတခုမှလိုက်နာလိုထုတ်လွှင့်စံရွေးချယ်နိုင်သည်။ အစစ်အမှန်အချိန်ထက်ပိုမြန်ခုနှစ်, RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေးအလိုအလျှောက်အသံပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးရုံနှစျခုကလစ်အတွက်လိုက်နာဖိုင်နှင့်တစ်ပူးတွဲ .csv-ချပ်အသံကျယ်အစီရင်ခံစာထွက်ပြန်ဆို။
အတော်ကြာအသံကျယ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း tools များစျေးကွက်အပေါ်ရှိပါတယ်နေစဉ်, အမှန်တကယ်လိုက်နာမှုသို့အဆင့်ဆင့်သို့ဆောင်ခဲ့၏တာဝန်ယခုတိုင်အောင်တစ်အကြီးအကျယ်ကို manual, အချိန်-စားသုံးဖြစ်စဉ်ကိုကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အမြန် turnaround တစ်ဦးကိုလက်ခံစံပိုပိုပြီးဖြစ်လာမှုနှင့်အတူကြောင့်အသံကျယ်ကိစ္စများမှပယ်ချခဲ့တဲ့ပြပွဲရှိခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေးမသက်ဆိုင်ဒေသနှင့်အယ်ဒီတာကျွမ်းကျင်မှုစံချိန်စံညွှန်းများ loudness ဘက်ကလိုက်လျောညီထွေထဲက guesswork ကြာပါသည်။
"ကျနော်တို့က post ကိုနှင့်ထုတ်လွှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအရည်အသွေးနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုအဘို့မိမိတို့လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအလိုအလျှောက်အသံကျယ်ဆုံးမပဲ့ပြင်ဖြေရှင်းချက်ပူဇော်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေ", Matt Hines က, iZotope မှာကုန်ပစ္စည်း Manager ကိုကဆိုသည်။ "ကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးအများဆုံးအဓိက audio- နှင့်ဗီဒီယို-တည်းဖြတ်ရေးပလက်ဖောင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်းစဉ် RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေးအသုံးပြုသူများကသူတို့အလုပ်အတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာယုံကြည်မှုကိုငါပေးမည်။ "
RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွင်းရှိအသိဉာဏ် DSP အပြောင်းအလဲနဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖြစ်၏နှင့်အထူးပွင့်လင်းကျယ်လောင်ဆုံးမခြင်းကိုအာမခံဖို့, အစီအစဉ်ကိုအမျိုးအစားတစ်ခုအကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးကျယ်လောင်သည်းခံစိတ်မီတာပူဇော်ဖို့တီထွင်ခဲ့သည်။ RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေးကိုမဆိုလုပ်ငန်းအသွားအလာသို့ချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းမှုများအတွက်, 5.1 မှတက်, မိုနို, စတီရီယိုနှင့်ပတ်လည်ရုပ်သံလိုင်းအရေအတွက်ထောက်ခံပါတယ်။
RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေးများအတွက် Audiosuite DPM နှင့် AAX plug-in ကိုစံထောက်ခံပါသည် လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer နှင့် Pro Tools များ။ RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေးကိုလည်းအစဉ်အဆက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကို Adobe ပလက်ဖောင်းမှအော့ဖ်လိုင်းအသံကျယ်-compliant အပြောင်းအလဲနဲ့ဆောင်ခဲ့ကို Adobe Premiere Pro ကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ် extension ကို API ကိုသို့ပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။
စျေးနှုန်း & ရရှိနိုင်
RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေးနွေ 2015 အတွက်မျှော်မှန်းလွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူ, (£ 299 / € 205) $ 279 များအတွက် NAB 349 မှာကြိုတင်မှာယူရရှိနိုင်ပါသည် (MSRP $ 325 / € 239 / £ 2015) ။
NAB 2015 မှာ iZotope
ပြပွဲကြမ်းပြင်ပေါ်မှာနှင့်မှာတက်ရောက်သည့် RX အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေး၏ပထမဦးဆုံးပြည်သူပိုင်တင်ဆက်မှုအဖြစ် RX4အသံပြုပြင်နှင့်တိုးမြှင့်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည် NAB CPUG Las Vegas မှ SuperMeet အင်္ဂါနေ့ပေါ်တွင် Riviera Royal ဟိုတယ် Ballroom က, 14 pm မှာဧပြီလ7မှာ။ အစောပိုင်းလာကြခြင်းနှင့်4ထံမှ iZotope အဖွဲ့တွေ့ဆုံမည်: အ SuperMeet ဒစ်ဂျစ်တယ်ဟန်ပြမှာနောက်ပိုင်းတွင် 30 ညနေ။
iZotope, Inc အကြောင်း
iZotope လာအောင်နှိုးဆွခြင်းနှင့်ဖန်တီးမှုဖြစ်လူတွေကို enable ပြုလုပ်ဆန်းသစ်ထုတ်ကုန်စေသည်။ ကင်းဘရစ်, မက်ဆာချူးဆက်အခြေစိုက်, iZotope ရောနှောပညာရှင်များနှင့်လေ့လာလိုက်စားဘို့ဆုရထုတ်ကုန်များနှင့်အသံနည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးဆဲဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအောင်သိရသည်။ ကျော် 50 နိုင်ငံများရှိသန်းပေါင်းများစွာသောပြည်သူများအသုံးပြုသော, iZotope ထုတ်ကုန်ကိုဖြတ်ပြီးဂရမ်မီဆုရှင်ဂီတစတူဒီယို, Oscar- နှင့်သူဟာ Emmy-အနိုင်ရရုပ်ရှင်နဲ့တီဗီ post ကိုထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုနှင့်ထင်ရှားတဲ့ရေဒီယိုစတူဒီယိုအဖြစ်မြေအောက်ခန်းများနှင့်အိပ်ခန်းစတူဒီယို၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာ ကမ္ဘာလုံး။ ထိုကဲ့သို့သောကို Adobe အဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းမိတ်ဖက်ဖွငျ့ iZotope လည်းအင်အားကြီးထုတ်ကုန်, လွန်စွာလိုလားသောMicrosoft ကနှင့် Sony က။ iZotope မကြာသေးမီကအနေနဲ့သူဟာ Emmy နှင့်အတူဂုဏ်ပြုခဲ့သည်® သူ့ရဲ့ flagship အသံပြုပြင် suite ကို, RX များအတွက်အင်ဂျင်နီယာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ထူးချွန်အောင်မြင်မှုအဘို့ဆုချီးမြှင့်®.
iZotope ထုတ်ကုန်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.izotope.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ iZotope အသံကျယ်ထိန်းချုပ်ရေး NAB 2015 post ကိုထုတ်လုပ်မှု RX4 ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-03-26
ယခင်: ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်အဖြစ် ChyronHego ချိန်းဆိုတဲ့ Carl Blandino
နောက်တစ်ခု: Dalet ဆွီဒင်ရေဒီယိုသတင်းကဏ္ဍစာချုပ်ဆွတ်ခူး